မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Yantai Tonghe Precision Industry Co. , Ltd.
Q: Quick Lift အသုံးပြုနေစဉ်ရုတ်တရက်ပါဝါဆုံးရှုံးသွားသည်။
A: မလုပ်ပါဘူး။ ရုတ်တရက်ပါဝါပြတ်တောက်ပြီးနောက်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်အလိုအလျောက်ဗို့အားကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပါဝါပြတ်တောက်ချိန်တွင်အခြေအနေကိုမြင့်တက်မကျဆင်းစေဘဲဆက်ထိန်းထားမည်ဖြစ်သည်။ ပါဝါယူနစ်ကို manual ဖိအားသက်သာစေသောအဆို့ရှင်တပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ဖြင့်ဖိအားပေးမှုသက်သာပြီးနောက်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်ဖြည်းဖြည်းကျလိမ့်မည်။
Q: Quick Lift သည်တည်ငြိမ်နေပါသလား။
A: Quick Lift ၏တည်ငြိမ်မှုသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ အဆိုပါစက်ကိရိယာများမှအီးစံအီးလက်မှတ်ရှောက် သွား. ရှေ့, နောက်ကျောလေးလမ်းညွန်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဝန်စမ်းသပ်မှု, left, နှင့်လက်ျာဘက်, ရှိသမျှတွေ့ကြံခဲ့သည်။
Q: Quick Lift ၏အမြင့်သည်အဘယ်နည်း။ ယာဉ်ရုပ်သိမ်းပြီးနောက်မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်အတွက်အောက်ခြေမှာရှိအလုံအလောက်အာကာသပါသလဲ
ဖြေ။ ။ Quick Lift ဆိုတာကကွဲပြားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပါ။ ယာဉ်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးသောအခါအောက်ခြေနေရာသည်လုံးဝပွင့်လင်းသည်။ မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်နှင့်မြေအောက်အကြားအနည်းဆုံးအကွာအဝေး ၄၇၂ မီလီမီတာ၊ အမြင့်ညှိစက်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အကွာအဝေး ၆၃၉mm ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများသည်ယာဉ်အောက်ရှိပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများကိုအလွယ်တကူလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လိမ်ပျဉ်ပြားတပ်ဆင်ထားသည်။
မေး: သည် Inground ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်လွယ်ကူသောချီ?
A: မြေအောက်ဓာတ်လှေကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်သောနေရာရှိမြေပြင်ပေါ်တွင်ရှိပြီးကက်ဘိနက်တံခါးကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။ မြေအောက်အဓိကအင်ဂျင်သည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးပျက်ကွက်မှုဖြစ်နိုင်ချေနည်းသည်။ သဘာဝဆည်ကြောင့် (များသောအားဖြင့် ၅ နှစ်ခန့်) ရေနံဆလင်ဒါတွင်တံဆိပ်ခတ်ထားသည့်လက်စွပ်ကိုအစားထိုးရန်လိုအပ်ပါက၊ သင်ကထောက်ခံသည့်လက်မောင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်၊ အမြင့်တင်သည့်တိုင်၏အဖုံးကိုဖွင့်နိုင်သည်၊ ။
Q: Inground Lift ကိုအသုံးပြုပြီးပါကအလုပ်မလုပ်လျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
၁။ ပါဝါယူနစ်မာစတာခလုတ်ကိုမဖွင့်ပါ၊ အဓိက switch ကို "ပွင့်လင်း" အနေအထားသို့ပြောင်းပါ။
၂။ ပါဝါယူနစ်လည်ပတ်မှုခလုတ် damaged ပျက်စီးသည်， ခလုတ်ကိုစစ်ဆေး။ အစားထိုးပါ။
မေး: Iground ဓာတ်လှေကားကြီးပြင်းပေမယ်လျှော့ချမနိုင်လျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း
A: ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းသည်အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အမှားများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖယ်ရှားပစ်ပါ။
၁။ လေဖိအားမလုံလောက်ခြင်း၊ စက်မှုဆိုင်ရာသော့ခတ်ထားခြင်းမရှိ။ ， ၀.၆ မီတာအထက်ရှိသင့်သော air compressor ၏ output pressure ကို， စစ်ဆေးခြင်း၊ အက်ကြောင်းများအတွက်လေကြောင်းတိုက်နယ်စစ်ဆေးပါ၊
2.The ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်ရေထဲသို့ဝင်, အကွိုင်ပျက်စီးခြင်းနှင့်ဓာတ်ငွေ့လမ်းကြောင်းကိုချိတ်ဆက်မရနိုင်ပါ။ လေထု compressor ၏ရေ - ရေ separator ပုံမှန်အလုပ်လုပ်အခြေအနေတွင်ကြောင်းသေချာစေရန်လေအဆို့ရှင်ကွိုင်၏အစားထိုး။
3.Unlock ဆလင်ဒါပျက်စီးမှု, အစားထိုးဆလင်ဒါသော့ဖွင့်။
4.Electromagnetic pressure relief valve ကွိုင်ပျက်စီးသွားပြီး electromagnetic relief valve ကွိုင်ကိုအစားထိုးပါ။
5.Down ခလုတ်ကိုပျက်စီးသည်, Down ခလုတ်ကိုအစားထိုးလိုက်ပါ။
6.Power ယူနစ်လိုင်းပြတ်ရွေ့, စစ်ဆေးမှုနှင့်ပြုပြင်မျဉ်း။
မိုဘိုင်းလူပျို Post ကိုကား Lift, အိတ်ဆောင်လူပျို Post ကိုကား Lift, အိတ်ဆောင် Hydraulic Scissor Car Lift, နှစ်ချက် Post ကို Inground ဓာတ်လှေကား, လူပျိုခေတ္တဆလင်ဒါ, နှစ်ချက် Post ကိုမြေအောက်ဓာတ်လှေကား,